Anoshamisa Mhuka uye Kwaungavawana, imwe JK Rowling yakarova. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Fantasy, Type, Literature, Vechidiki Mabhuku, Nyaya
Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana.
Kana zviri zvinhu zvakavanzika, taura nezvazvo Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana icho chinhu chakakosha. Iri bhuku rinotsanangura zvisikwa zvemashiripiti zvinogona kuwanikwa mumabhuku eHarry Potter, ichipa ruzivo rwechimwe nechimwe chezvikara, kwavanowanikwa munyika uye hunhu hwavanazvo.
Bhuku rinofumura mabasa akanyorwa na Newt Scamander, magizoologist kuChikara Bazi reMinistry of Magic. Iro zita remunyori, chokwadika, ipseudonym chigadzirwa chehunyanzvi hwemunyori weChirungu JK Rowling, uyo asingarasikirwe nehunyanzvi kunyudza vaverengi vake munyika yake inoshamisa yemashiripiti.
1 Zvishoma nezvemunyori chaiye (zvinonakidza chokwadi kubva pakutanga kwake)
2 JK Rowling Nhoroondo
3 Kudzidza magizoology
4 Albus Dumbledore Chirevo
5 Mhuka dzinonakidza dzinogutsikana uye kwadzingavawana
6 Mabhuku ane chekuita nesaga
Zvishoma nezvemunyori chaiye (zvinonakidza chokwadi kubva pakutanga kwake)
Muhupenyu chaihwo kure neichi chinoshamisa chose, iro bhuku rakanyorwa naJK Rowling, sekuenderera kweiyo saga yeHarry Potter. Zvese zvakabuditswa kubva mukutengesa kwayo zvakaenda kune rudo kune mapurojekiti akabatana nevana vanoshaya kwazvo pasi, kuburikidza neComic Relief kambani.
Ehe, Joanne Rowling ipeni inounza ino nyika isingaite kuhupenyu. Chinhu chinonakidza ndechekuti munyori anotora pseudonym yake JK Rowling pane kurudziro kubva kumugadziri wake. Murume uyu akataura kuti, kuti ubudirire muUK, zvaive nani kusava nezita rechikadzi pabutiro remabhuku ake, nekuti zvaizokanganisa kufarira kwevaverengi. Chinoshamisa ndechekuti Kunyangwe Rowling akawana budiriro yake yaaida, akaramba achirambwa nevaparidzi.
Akatarisana neicho chokwadi chinotyisa chevanhu vakasarudza vanyori vechirume, Joanne akafunga kushandisa mavambo ake nekuwedzera iyo K, kutanga kwezita raambuya vake Kathleen. Nenzira iyi akapedzisa murume wechiratidziro JK, icho pamwe chete nezita rake rezita chakamutungamira mukurumbira usingatarisirwi nesaga nezve wizard diki inonzi Harry Potter.
JK Rowling Nhoroondo
Asati anyora hunyanzvi hwake, aive nemifananidzo yemanovel evakuru, kunyange izvi zvaisashinga kuzvitsikisa. Hupenyu hwake hwakange husiri kufamba zvakanaka, kurambana kwakaipa nekuda kwekushungurudzwa uye kuve amai vasina murume, kwakaita kuti ave mumamiriro asina hupfumi.
Panguva yakaipisisa yehupenyu hwako, uine mashoma zviwanikwa, Rowling akauya neiyo yekutanga Harry Potter bhuku mushure mekukwira chitima. Nenyaya yake, rwendo irworwo rwairatidza uye paakangoburuka pangoro, akange atove nerondedzero dzevanyori vese vanoonekwa mubhuku rekutanga.
Kubudirira kwepasirese kwesaga iri kwakakurumidza kumuita bhirionea, munhu wekutanga kuwana mamirioni emadhora chete ekunyora mabhuku. Rowling yakanyorwa semukadzi akapfuma muUK, aine mukurumbira wakawanda pabasa rake pasirese.
Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana inoteedzana yemabhuku akabatana neiyo Harry Potter saga. Mukati merangano remuroyi wechiRungu rinokwezva ruzhinji rwenyika pane aya magwaro ezvemagizoology aive chikamu chekudzidza kwake kuHogwarts.
Tinogona kutaura izvozvo Iri bhuku rine nyaya mbiri, iyo yakataurwa muHarry Potter mafirimu, uye iyo chaiyo hupenyu nyaya. Yekutanga inotaura nezve rimwe remabhuku makuru evadzidzi vemashiripiti, uye yechipiri raive basa rekuwedzera resaga uye gare gare rakashanduka rikava firimu.
Izvo zvinodikanwa kudzikamisa izvo pakutanga zvaifungidzirwa kuita trilogy yemafirimu akavakirwa pa Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana. Nekudaro, JK Rowling akataura paTwitter muna2016 uye akataura kuti huwandu hwemafirimu mashanu aizoita hurukuro yese. Chirevo chemunyori chakakonzera kushushikana kukuru pakati pevateveri vemabhuku ake, uye izvi hazvisi pasina, nekuti iwo mabhuku ari muHarry Potter saga ari pakati peakanyanya kugadzirirwa mafirimu.
Iri bhuku rinotsanangura chinonzi magizoology chii, sainzi inodzidza nezve makumi manomwe neshanu mhuka dzemashiripiti. inowanikwa munyika dzakasiyana dzepasi.
Albus Dumbledore Chirevo
Zvinoenderana nemashiripiti zvakasikwa zvaHarry Potter, sumo rebhuku iri rakanyorwa nemukuru weHogwarts, Albus Dumbledore, uyo anonongedza kuti chinyorwa ichi ndechimwe chezvakakosha izvo zvinofanirwa kuve nemudzidzi wese wemashiripiti.
"Nyanzvi yaNewt Scamander yakatenderwa sebhuku reHogwarts Chikoro cheMashiripiti uye Uroyi kubvira payakatanga kuburitswa, uye zvinotora yakawanda yemakiredhiti emakadhi akanaka vadzidzi vedu vanowana muChechi yeMagical Zvisikwa kosi., "kunyange hazvo risiri bhuku rakashandiswa kungoshandisa chete," anodaro Dumbledore mumashoko ekutanga.
Zviri mukati me Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana
Iri bhuku taura nezve mhuka dzakanaka kana zvemashiripiti izvo Newt Scamander akadzidza. Nekudaro, zvinojekeswa kuti kune zvimwe zvisikwa zvinonakidza zvisina kuongororwa muchinyorwa chino.
Zvitsauko zvekutanga zvebhuku zvinotsanangura kuti chii chinoshamisa chikara kana mhuka., inotaura zvishoma nezvenhoroondo yeMuggle ruzivo nezvezvakanaka zvikara uye nei vangadai vakahwanda. Izvo zvakakosha kujekesa kuti "Muggles" vanhu vasiri-mashiripiti vanhu.
Scamander haarasikirwe neruzivo panguva yekuvandudzwa kwebhuku, iye anoreva kunzvimbo dzakachengeteka dzezvisikwa, kutonga, kutengesa kwavo, uye zvakare inotaura nezve iyo kukosha kwemagizoology uye kupatsanurwa kunoitwa ne Ministry of Magic. Mutauro unoshandiswa uri nyore, asi unokwezva, uye unokurumidza kutora vaverengi.
Ehe saizvozvo, Iri bhuku rinotsanangura mhuka dzakanaka kwazvo, mune runyorwa kubva A kusvika Z. Zvimwe zvezvaanotsanangura ndezve: achromantic, mapapiro emabhiza, macaur, magakatira emoto, phoenixes, shato, nigger, werewolves, gnomes, nyoka dzegungwa, troll, uye unicorn, kungodoma mashoma.
JK Rowling akatorwa.
Mabhuku ane chekuita nesaga
Iri boka ndimo mune mabhuku e Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana, ayo anonoka kupfuura saga, kunyange hazvo, maererano nekuverengwa kwenguva yenyika yewizard yaHarry Potter, zvakanyorwa kare kare. Ndiwo mabasa anofanirwa kuve neanofarira saga kana vachida kunyatsonzwisisa zvemashiripiti zvakagadzirwazve naJK Rowling.
Quidditch kuburikidza nemazera
Iyo Tales yeBheedle iyo Bard
Harry Potter uye Akatukwa Mwana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana